China xi switch switch BLPS-YKHL02 mveliso kunye nabenzi | Iqanda
Utshintsho lweempawu zoxinzelelo
Yamkela umsonto isinxibelelanisi esikhawulezayo okanye ulwakhiwo lombhobho wokufakelwa kombhobho, oguqukayo kwaye kulula ukuyisebenzisa ngaphandle kofakelo olukhethekileyo kunye nokulungiswa. Uhlobo lwe-plug-in kunye nohlobo lwentambo yoqhagamshelo lombane lunokukhethwa ngabasebenzisi ngokuthanda. Isikhundla esinye sokuma esinye okanye isibonda esinye esime kabini, esidla ngokuvulwa okanye ngesiqhelo ukuvalwa kwesakhiwo sokudibanisa kunokukhethwa ngabasebenzisi. I-inductor engenanto engenanto ikhuselekile kwaye ithembekile.
Ukusebenza umgaqo utshintsho koxinzelelo:
Xa uxinzelelo lwaphakathi (ulwelo okanye igesi) kwinkqubo yoxinzelelo iphezulu okanye isezantsi kunoxinzelelo lokhuseleko olulinganisiweyo, uvalo lwesinyithi olumise okwediski kwinkqubo luya kutsiba kwangoko, lityhale umnxeba okanye ucime umtshini ngokuvula intonga. Xa uxinzelelo luyehla kwixabiso lokufumana kwakhona, idiski iya kuseta kwakhona kwangoko kwaye iswitshi siya kuseta ngokuzenzekelayo.
Inombolo yesalathiso yexabiso eliqhelekileyo loxinzelelo kuxinzelelo lotshintsho switch iyunithi: iMpa）
Ukuphula uxinzelelo kunye nokunyamezelana
Ukudibanisa ixabiso loxinzelelo kunye nokunyamezelana
Inkampani yethu ifumana izimvo ezintsha, ulawulo olungqongqo lomgangatho, uluhlu olupheleleyo lokulandela umkhondo wenkonzo, kwaye iyalandela ukwenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Ishishini lethu lijolise "kukunyaniseka nokuthembeka, ixabiso elilungileyo, umthengi kuqala", ke siphumelele ukuthembela kuninzi lwabathengi! Ukuba unomdla kwiimveliso zethu kunye neenkonzo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi!
Egqithileyo Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL03 Okulandelayo: Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL01
Isixhobo soxinzelelo soxinzelelo lomoya
Umoya Pressure Tshintsha
Uxinzelelo lokuLawula ukutshintsha
Rexroth Uxinzelelo lokutshintsha
Utshintsho lweStam Pressure
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKM06
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL06
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YK2X3
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKM05
Uxinzelelo lokutshintsha i-BLPS-YKHL03